एक लेखक? तपाइँको पुस्तकलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय बेस्टसेलर बनाउने Pot सामर्थ्य तरिकाहरू | Martech Zone
कुनै श doubt्का छैन, यदि तपाईं एक महत्वाकांक्षी लेखक हुनुहुन्छ भने आफ्नो क्यारियर को केहि बिन्दु मा तपाईंले यो प्रश्न सोधेको हुनुपर्छ, कसरी मेरो किताब एक बेस्टसेलर बनाउन? प्रकाशक वा कुनै बेस्टसेलिंग लेखकलाई। सही? ठिक छ, एक लेखक हुनु, यदि तपाई अधिकतम सम्भावित संख्यामा पाठकहरुलाई बेच्न चाहानुहुन्छ र तिनीहरुबाट सराहना गर्न सक्नुहुन्छ भने यसले निरपेक्ष अर्थ राख्छ! यो एकदम स्पष्ट छ कि तपाईंको क्यारियर मा यस्तो बदलाव तपाईं आफ्नो प्रतिष्ठा पहिले कहिल्यै बनाउन को लागी दिनुहुन्छ।
त्यसोभए, यदि तपाइँ तपाइँको आवाज सुन्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँले केहि प्रभावकारी र विशेष कदम चाल्नु पर्छ। तपाईं निश्चित रूपमा उपन्यासलाई बेस्टसेलरमा बदल्न सक्नुहुन्न यदि यो राम्रोसँग लेखिएको छैन भने। तर, एक महान शैली मा लेखन को तथ्य मात्र विचार को अलावा, तपाईं आफ्नो पुस्तक एक बेस्टसेलर बनाउन केहि अन्य वास्तविकता को ख्याल गर्नुपर्छ।
त्यसो गरेको रहस्य जान्न चाहानुहुन्छ? त्यसो भए, यहाँ छवटा दृष्टिकोणहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो शहर शहरको सब भन्दा ठूलो कुराकानी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। अगाडि मात्र पढ्नुहोस् र म साँच्चिकै विश्वास गर्दछु कि यी सुझावहरूले तपाईंको लागि काम गर्दछ!
तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ केहि को लागी जानुहोस् - यदि तपाईं दिमागमा यस्तो सोच्नुहुन्छ कि भीडलाई पर्याप्त अपील गर्ने विषयले तपाईंको पुस्तकलाई बेस्टसेलर बनाउनेछ भने तपाईं बिल्कुल गलत हुनुहुन्छ। यसको सट्टामा, त्यस्ता शीर्षकहरूमा लेख्नुहोस् जुन तपाईंलाई रमाईलो लाग्दछ र उस्तै पढ्न चाहनुहुन्छ। क्यारोल शिल्ड्सले ठीक भनेको छ, 'तपाईंले पढ्न चाहानु भएको पुस्तक लेख्नुहोस्, जुन तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुन्न'। त्यसोभए, एक परंपरागत शैलीमा एक नीरस पुस्तक लेख्ने बाहेक पनि यदि तपाइँले एउटा कथा लेख्नुभयो जुन तपाइँको लागि महत्वपूर्ण छ भने यसको बेस्टसेलर हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
सहि थिमको लागि अप्ट गर्नुहोस् - एक उत्तम कारकहरू जसले एक उपन्यासलाई बाँकीबाट अलग रहन दिन सक्दछ यसको विषयवस्तु हो। तपाईका पाठकहरूले तपाईको पुस्तक अरूलाई सिफारिस गर्छन् केवल जब तिनीहरुसँग यो सम्बन्धित हुन सक्छ। साथै, तिनीहरू कसैलाई किताब पठाउँछन् जब कि तिनीहरूलाई लाग्छ कि पुस्तकले सन्देश पठाउँदै छ जुन अरूले पनि पढ्नु आवश्यक छ। त्यसो भए तपाईले आफ्नो उपन्यासको लागि सही विषयवस्तु फेला पार्न आफ्नो बहुमूल्य समय र उर्जा खर्च गर्नुपर्दछ।
टोन तटस्थ हुन दिनुहोस् - यदि तपाइँको आदर्श वाक्य तपाइँको पुस्तकलाई विश्व भर मा चिन्ने योग्य बनाउनु छ भने तपाइँले एक तरीकाले लेख्नु पर्छ जुन सबै प्रकारका पाठकहरूलाई जडान गर्न सक्दछ। तर, पर्खनुहोस्! मेरो यो कथनबाट, मेरो मतलब यो होइन कि तपाईंको कथा विश्वव्यापी संस्कृतिमा मात्र आधारित हुनुपर्छ। तपाई एकदम राम्रोसँग एउटा कथा लेख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको मुटुको नजिक छ, जस्तै तपाईको राष्ट्र, संस्कृति वा जे पनि! केवल सुनिश्चित गर्नुहोस् कि संवाद, कथन, लेखन शैली इत्यादि संसारभरका उपस्थित श्रोताहरूले बुझ्ने छन्। के तपाईलाई २०१ 2015 को बुकर पुरस्कार विजेता याद छ - सात हत्याको संक्षिप्त इतिहास? ठिक छ, म यस प्रकारको टोनको बारेमा कुरा गर्दैछु।
तपाईंको 'बुक कभर' अद्वितीय रूपमा डिजाइन गर्नुहोस् - हामी वर्षौंसम्म 'यसको कभर द्वारा पुस्तक न्याय नगर्नुहोस्' जस्ता बयानमा विश्वास गर्न सक्दछौं। तर, व्यावहारिक रूपमा, पुस्तकको बाहिरी हेराईले सामान्यतया सम्पूर्ण कथा सरल बनाइन्छ जुन भित्र लेखिएको हुन्छ। त्यसोभए, तपाईंको पुस्तकलाई एउटा दयालु लुक दिनको लागि केही महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हुन्छ। तर, यो नसोच्नुहोस् कि तपाईलाई यसो गर्नका लागि धेरै पैसा खर्च गर्नु पर्छ! तपाइँ सबैलाई चाहिन्छ एक रचनात्मक डिजाइनर हो जो विचारहरूलाई एक उत्तम पुस्तक कभरको सर्तमा लाइभ बनाउनमा निपुण हुनुहुन्छ।
उत्तम प्रकाशकको ​​लागि अप्ट गर्नुहोस् - ठिक छ, जब पुस्तकलाई बेस्टसेलरमा परिवर्तन गर्ने कुरा आउँछ भने प्रकाशकले 'सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण' भूमिकाहरू मध्ये एक खेल्दछ। तपाइँले छान्नु भएको प्रकाशकको ​​ब्रान्ड विश्वसनीयताले तपाईंको पुस्तकको विश्वसनीयतालाई असर पार्नेछ। त्यसोभए त्यस्तो प्रकाशक छनौट गर्न नबिर्सनुहोस् जसले तपाईंको पुस्तकको बिक्रीको ग्राफ बढी जान दिन्छ!
'गुडरेड्स' मा एक लेखक पृष्ठ र पुस्तक प्रोफाइल सिर्जना गर्नुहोस् - जब पुस्तक प्रेमीहरूको कुरा आउँदछ तब गुडरेड्स भनेको गुज्रिरहेको नाम हो !! त्यसोभए, यदि तपाइँ तपाइँका पुस्तकहरू राम्रोसँग बेच्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँले यसलाई श्रोताको लागि देखाउँनु पर्छ जो विश्वभरि उपस्थित छन्। र, गुड्रेड्स त्यसो गर्न उत्तम विकल्प हो! एकचोटि तपाईंले 'गुडरेड्स' मा खाता बनाइसकेपछि, तपाईंको साथीहरू, अनुयायीहरू, र पाठकहरूलाई साइटमा एक समीक्षा छोड्नुहोस् र अन्तिममा यस वेबसाइटका अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई सिफारिस नगर्न भन्नुहोस्।
विज्ञापन गर्न सोशल मिडिया प्रयोग गर्नुहोस् - आजकल मानिसहरुले आफ्नो खाली समयको धेरैजसो समय बिभिन्न सामाजिक मिडिया नेटवर्कहरु जस्तै फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम इत्यादिमा अनलाईनमा बिताउँदछन्। तसर्थ, यदि तपाइँ विश्वमा तपाइँको पुस्तकको ठोस छाप छोड्न चाहानुहुन्छ भने यी प्लेटफर्महरू तपाइँको पुस्तक बजारमा प्रयोग गर्नुहोस्। जसले तपाईंको जागरूकता र प्रचार बढाउनेछ। कसरी जान्न चाहनुहुन्छ? ठीक छ, यो धेरै सरल र सजिलो छ! पुस्तक ट्रेलरहरू सिर्जना गर्दै, पुस्तक उद्धरण साझा गर्दै, पुस्तक डुडलहरू निश्चित रूपले तपाईंको लागि चमत्कारहरू गर्दछ।
अन्तमा आउँदैछ ...
यी उपर्युक्त महत्वपूर्ण तथ्यहरु बाहेक, यदि तपाई आफ्नो पुस्तक बेस्टसेलर बनाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईले अन्य बिभिन्न कुराहरु तपाईको दिमागमा राख्नु पर्छ। जस्तै, तपाईको पुस्तक धेरै पटक सम्पादन र पुन: सम्पादन गर्ने, अनुवाद प्रकाशन पनि गर्ने, लेखकको वेबसाइट भएको, तपाइँको ग्राहकहरूलाई ईमेल पठाउने, बाध्यकारी किताब ब्लरब लेख्ने इत्यादि पक्कै पनि तपाईलाई बेस्टसेलरको बाहेक अरू केही आउन मद्दत गर्दछ। त्यसो भए अब पर्खनुहोस्! यी टिप्सलाई मात्र ध्यानमा राख्नुहोस्, अगाडि जानुहोस्, लेख्नुहोस् र तपाईंको अन्तर्राष्ट्रिय बेस्टसेलर चाँडै प्रकाशित गर्नुहोस्।
टैग: अत्यधिक बिक्री भएकोअत्यधिक बिक्री भएकोपुस्तकपुस्तक कलापुस्तक कभरपुस्तक पदोन्नतिगुड्रेड्सप्रकाशनसामाजिक पदोन्नतीकिताब लेख्दै
संकेत पटेल संस्थापक र निर्देशक हुन् ब्लुरपॉइन्ट मिडिया, एक SEO, र डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी। अनलाइन मार्केटिंग को सबै पक्षहरूमा मानिसहरूलाई मद्दतको लागि उनको उत्कटता उसले प्रदान गर्ने विशेषज्ञ उद्योग कभरेजको माध्यमबाट बहन्छ। ऊ वेब मार्केटिंग, सर्च इञ्जिन अप्टिमाइजेसन, सोशल मीडिया, एफिलियट मार्केटिंग, बी २ बी मार्केटिंग, गुगल, याहू र एमएसएनको अनलाइन विज्ञापनमा विशेषज्ञ छ।
मार्केटिंगको विशाल टेक्नोलोजी समस्या समाधान गर्न तीन कुञ्जीहरू